कुकुर पूजाको दिन
कुपण्डोलमा गाईको दुध चुस्दै गरेको कुकुर । तस्वीरः राजु काफ्ले
क्यानडाको संसद भवन भित्रै गोली चल्यो
बन्दूकधारीसहित २ जनाको मृत्यु, प्रधानमन्त्री सुरक्षित ६ कात्तिक, काठमाडौं । क्यानडाको राजधानी ओटावास्थित संसद भवन भित्रै गोली चल्दा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । मारिनेमा एकजना सुरक्षाकर्मी र एकजना गोली...
देशैभरि सुरु भयो देउसी भैलोको रौनक
सिस्नुपानीका स्रष्टाले यसरी भट्याए ५ कात्तिक, काठमाडौं । राष्ट्रिय पर्व तिहारको अवसरमा सिंगै देश देउसी भैलोमय बनेको छ । विद्युत प्राधिकरणको उर्दीलाई उल्लंघन गर्दै सहरभरि बत्तीको झिलिमिली देखिएको...
डिभिजन थ्रीमा नेपालको लक्ष्य उपाधि रक्षा : पारस
'राम्रो गर्न सक्ने क्षमता छ, चाहिएको बेला खेल्न सक्नुपर्छ' ५ कात्तिक, क्वालालाम्पुर । युनाण्डासँगको खेलबाट नेपालले आईसीसी वर्ल्ड क्रिकेट लिग डिभिजन थ्रीको उपाधि रक्षा यात्रा थाल्दैछ । बुधबार क्वालालाम्पुरमा आयोजित कप्टेन प्रेसमिटमा कप्तान...
सप्तरीमा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप
५ कात्तिक, सप्तरी । सप्तरीको देउरी गाविसमा प्रहरी र स्थानीयवासीबीच झडप भएको छ । देउरी-७ स्थित एक घरमा छापा मारी भन्सार छलेको कपडा प्रहरीले...
» काभ्रेमा नाचेपछि कृषिमन्त्रीले भने- कर्मचारीतन्त्रले विकास गर्न दिएन
» खुकुरी प्रहार गरी आमाको हत्या
» फेसबुकमा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने युवक पक्राउ
» बाणिज्य बैंकलाई रेमिट्यान्स कारोबारमा कडाइ गरिँदै
» बारा दुर्घटना मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुग्यो
सिंहदरबारको चोरी प्रकरण : जसले बोल्यो, उसैलाई पोल्यो
५ कात्तिक, काठमाडौं । सस्तो लोकप्रियताका लागि जिम्मेवार पदाधिकारीले राज्यका जिम्मेवार निकायमा उपस्थित भएर जे पनि बोल्ने कि, प्रमाण पनि पेश गर्ने ? एमाले...
» गोकर्णको जंगलमा सहमति भएन, अब के हुन्छ ?
» यस्ता छन् लेखा समितिले ठहर गरेका सुवास निरौलाका कर्तुतहरु
» राजधानीमा चारजना ‘डाका’ समातिए
» मरुभूमिमा सास गयो, परिवारले लास पाएनन्
» कुकुरको पूजा वैज्ञानिक कि धार्मिक अन्धविश्वास ?
सिंहदरबारमा रंगरोगन गर्दै कामदार । तस्वीरः अनलाइनखबर
डिभिजन थ्री क्रिकेटमा सहभागी राष्ट्रका कप्तानहरु क्वालालम्पुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ट्रफ्री देखाउँदै । तस्वीरः सुरेश भुसाल / अनलाइनखबर
ललितपुरको लगनखेल चोकमा फूल बेच्न बसेका एक व्यापारी । तिहारकोबेला फूलको माग बढेपछि छिमेकी मुलुक भारतबाट पनि आयात गरिएको छ । तस्विर : अनलाइनखबर
संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्न बुधबार गोकर्ण रिसोर्ट पुगेका एमाओवादी र एमालेका नेताहरु । कांग्रेसको समेत सहभागीतामा नेताहरु आवासीय बैठक बसे पनि ठोस सहमति भएन । तस्विर : अनलाइनखबर
मलेसिया एयरपोर्टमा सन्दिपलाई लुटेरा बनाए कायस्थले
गोकर्णको जंगलमा सहमति भएन, अब के हुन्छ ?
यस्ता छन् लेखा समितिले ठहर गरेका सुवास निरौलाका कर्तुतहरु
काभ्रेमा नाचेपछि कृषिमन्त्रीले भने- कर्मचारीतन्त्रले विकास गर्न दिएन
खुकुरी प्रहार गरी आमाको हत्या
अरुण तेस्रोमा स्थानीयबासीले शेयर पाउने
राजधानीमा चारजना ‘डाका’ समातिए
यात्रानुभूति : नारायणथानदेखि बनेपासम्म
प्रचण्डज्यू ! देशमा फेरि चुनाव हुन्छ ।
पदमरत्न तुलाधर जनजाति आन्दोलनको सर्वसम्मत नेता
५ कातिक काभ्रे । कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुले कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताएका छन् । बुधबार काभ्रे जिल्ला पुगेका मन्त्री पराजुलीले कुटाेले...
५ कात्तिक, रुकुम । रुकुमको पूर्वी महत गाविस-१ मा खुकुरी प्रहार गरी मंगलबार राति आफ्नै छोराले आमाको हत्या गरेका छन् । २८ वर्षका छोरा...
फेसबुकमा महिलाको चरित्र हत्या गर्ने युवक पक्राउ
५ कात्तिक, काठमाडौं । नक्कली फेसबुक आइडी खोलेर महिलाको चरित्रहत्या गरेको आरोपमा काठमाडौंको रामकोट १ बस्ने २९ वर्षीय विकासराज गिरीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ...
बाणिज्य बैंकलाई रेमिट्यान्स कारोबारमा कडाइ गरिँदै
बारा दुर्घटना मृत्यु हुनेको संख्या ६ पुग्यो
फरार अभियुक्त पक्राउ पर्न थाले
गोकर्ण रिसोर्टमा जनजाति नेताको धर्ना
नेपालसँग विप्पा र सुपुर्दगी सन्धी गर्न चीनको प्रस्ताव
मेलम्ची बजार खुल्यो, यातायात पनि चले
गाई अनुसन्धानका हाकिम दुई लाख घुससहित पक्राउ
अर्थमन्त्री महत बेइजिङ प्रस्थान
५ कात्तिक, काठमाडौं । गोकर्ण रिसोर्टमा आवासीय बैठक बसेर संविधानका विवादित विषयमा सहमति खोज्ने प्रयासमा रहेका तीन दलका शीर्ष नेताहरु असफल भएका छन् ।...
५ कात्तिक, काठमाडौं । पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौला अन्ततः कारबाहीमा परेका छन् । बोर्डमा व्यापक अनियमितता गरेको ठहर गर्दै उनलाई लेखा...
५ कात्तिक, काठमाडौं । राजधानीको सोल्टीमोडमा दिउँसै डकैतीमा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसरका अनुसार मंगलबार काठमाडौं...
मरुभूमिमा सास गयो, परिवारले लास पाएनन्
कुकुरको पूजा वैज्ञानिक कि धार्मिक अन्धविश्वास ?
पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन
एमाओवादीलगायतका २२ दलले कात्तिक १० गते चियापान गर्ने
सिंहदरबारबाटै यसरी हराउँछन् सरकारी गाडी
५ कात्तिक, काठमाडौं । सामाजिक सन्जाल फेसबुकले आफ्ना प्रयोगकर्ताको खाताको सुरक्षाको लागि स्वचालित सेवा विकसित गरेको छ । जस्ले वेबको निगरानी मार्फत् चोरी भएका वा मिल्दोजुल्दो शंकास्पद इमेल ठेगाना र पासवर्ड पत्ता लगाउछ । यो सेवाले फेसबुक प्रयोगकर्तासँग जोडिएका जानकारीको जाँच गर्दछ र फेसबुकमा उल्लेख गरिएका विवरणसँग मेल खान्छ
वैज्ञानिकले बनाए ‘हावा छाता’, अब हावाले नै दिनेछ ओत
अब छाताको छानो कत्रो छ ? एउटा कतिजना सम्मलाई ओत देला ? कतै च्यातिएको पो छ की ? चुहिन्छ...
यो पोजमा द्रब्य शाह पनि उभिएका थिए । लिगलिगे दौडमा जितेको पहिलो क्षण । सबैका अगाडि श्रीपेच लगाउँदै गर्दाको...
केही समय अघि नेपाल भ्रमणमा आएकी बर्माकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसाङ सुकीले भनेकि थिइन् " एकै दिन यति धेरै पुर्व...
बिजनेस पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न लेखा समितिको निर्देशन
५ कात्तिक, काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल पर्यटन बोर्डमा करोडौं रुपैयाँको अनियमितामा प्रत्यक्ष संलग्न देखिएको ठहर गर्दै बोर्डका कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलालाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
लेखा समितिको बुधबार बसेको बैठकले निरौलालाई निलम्बन गर्न पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।...
५ कातिक काभ्रे । कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले कृषि क्षेत्रको विकास नहुनुले कर्मचारीतन्त्रमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताएका छन् । बुधबार काभ्रे जिल्ला पुगेका मन्त्री पराजुलीले कुटाेले काउली गाेड्नुका साथै केहीबेर कृषि
५ कात्तिक, संखुवासभा । नेपालमै बहुचर्चित अरुण तेश्रो जलविद्युत आयोजनामा स्थानीयबासीले शेयर पाउने भएका छन् । सदरमुकाम खाँदवारीमा लगानी बोर्डले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा अरुण तेस्रोका कार्यकारी निर्देशक
इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ४० प्रतिशत लाभांस पारित
नेपाली हस्तकलाको बजार विस्तारमा चीनले सघाउने
फेवा फाइनान्सकोे ३०.५० प्रतिशत लाभांश स्वीकृत
५ कात्तिक काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बाणिज्य बैंकहरुलाई रेमिट्यान्स कारोबारमा कडाई गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।...
हिरोइनले यसरी गरे कुकुर पूजा
काठमाडौ । गायिका कोमल वली बुधवार बिहान कुनै पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित भइनन् । कारण उनलाई आफ्नै घरमा पालिएका प्रिय कुकुर ‘कोको’ र ‘क्वीन’को...
करिश्माको सेक्सी पहिरन र ट्याटु
नायिका करिश्मा मानन्धर पहिरनको बिषयमा सधै नै अलग छिन् । उनले लगाएका पहिरनबाट प्रभावित हुनेहरु पनि धेरै छन् । छातीमा खोपिएको ट्याटुलाई देखाएर करिश्मा...
छविले च्याप्दा शिल्पालाई समस्या, आर्यन ओझेलमा
रहस्यमय राजेश हमाल
पर्वमा फिल्मको प्रभाव घट्दै, कुस्ती खेल्न छाडे निर्माता
मुम्बइ । पोर्न फिल्मलाई बिर्साउँदै बलिउडमा नयाँ इमेजका साथ स्थापित हुन कोसिस गरिरहेकी नायिका सन्नी लियोनी लुंगी डान्समा प्रस्तुत हुने भएकी छिन् । तेलुगु...
मुम्बइ । अभिनेत्री ऐश्वर्या रायले सुटिङ गर्दा अभिषेक बच्चनले छेउमा बसेर हेर्ने इच्छा ब्यक्त गरेका छन् । ‘म ऐश्वर्याको फ्यान हुँ यदि उनले अनुमति...
सोल्टीमा जरिन र एजाजको क्याटवाक
दिया मिर्जा बिबाह बन्धनमा
हिरोलाई भन्दा थोरै पारिश्रमिक दिन्छन् हामीलाई : दिपिका
सलमानकी हिरोइन नेपालमा, भन्छिन्-‘नेपाल घुम्न मन छ'(भिडियो)
अन्डरवर्ल्डको धम्कीपछि साहरुखले किने वमप्रुफ कार
चलचित्र छ एकान छ मा अभिनय गरेर एकाएक चर्चामा आएका कलाकार सन्दिप क्षेत्री नयाँ सिनेमामा अनुवन्धित भएका छन् । वितरक एवं निर्माता गोपाल कायस्थ (पानपराग)ले आफ्नो जन्मदिनको अबसर पारेर सन्दीपलाई सिनेमामा अनुवन्धित गरेका हुन्...
सुरुङ्गा गोल्ड कपको उपाधि झापा-११ लाई
अभ्यास खेलमा ज्ञानेन्द्रले हाने १६७ रन
एसियन टाउन स्केप अवार्ड बाग्मती एकीकृत विकास समितिलाई बाग्लुङमा डिक्सनेरी बैंक तथा बालमैत्री पुस्तकालय स्थापना
साहित्य समाज क्यानडाको साधारणसभा सम्पन्न दुबईमा प्रवासी नेपाली मंच यूएईले देउसीभैलो खेल्ने
गणेशमानको जन्मशताब्दीको अवसरमा बेल्जियममा गोष्ठी